Science Tantara & Zava-dehibe
John Watts Young (24 septambra 1930 - 5 Janoary 2018), iray amin'ireo fantatra indrindra amin'ny corps de corps du corps NASA. Tamin'ny 1972, lasa mpitarika ny misiona Apollo 16 izy tamin'ny volana volana ary tamin'ny 1982, dia lasa mpitarika ny sidina voalohany tao Columbia . Amin'ny maha-mpanamory sambon-toeram-piompiana tokana azy ihany no nahafantarana ny karazana fiaramanidina efatra samihafa, dia nanjary fanta-daza manerana ny masoivoho izy ary izao tontolo izao noho ny fahaiza-manaony ara-teknika sy ny tony amin'ny tsindry.
I Young dia nanambady indroa, indray mandeha tamin'i Barbara White, niaraka taminy nanangana zanaka roa. Taorian'ny fisaraham-panambadiany, dia nanambady an'i Susy Feldman i Young.
John Watts Young dia teraka tany San Francisco ho William Hugh Young ary Wanda Howland Young. Nipoitra tao Georgia sy Florida izy, izay nandinika ny natiora sy ny siansa ho toy ny Boy Scout. Amin'ny maha-mpianatra ho mpianatra ao amin'ny Georgia Institute of Technology, dia nianatra momba ny teknolojia izy ary nahazo mari-pahaizana ambony indrindra tamin'ny taona 1952. Niditra tao amin'ny tafika an-dranomamy amerikana avy hatrany avy any amin'ny oniversite izy, ary niafara tamin'ny fiofanana fiaramanidina. Izy dia lasa mpanamory fiaramanidina mpiady, ary tamin'ny farany dia nanatevin-daharana mpilalao baolina mpiady iray izay nandehanany misiona avy any amin'ny Ranomasina Coral sy ny USS Forrestal. Nanjary lasa mpanamory fisedrana ny tanora tamin'izany fotoana izany, satria maro be ireo mpanamory sambon-danitra, tao Patuxent River sy ny Naval Pilot School. Tsy vitan'ny hoe nanidina fiaramanidina fanandramana niainana izy, fa nandrakitra horonan-tsarimihetsika marobe maromaro kosa izy rehefa nanidina ny jiro Phantom II.
Mizara ny NASA
Tamin'ny 2013, John Young dia namoaka ny autobiografie momba ny taona ho toy ny mpanamory sy ny mpanamory baomba, antsoina hoe Forever Young . Nolazainy tamim-pahalemem-panahy sy tamim-panetren-tena ny tantaran'ny asa mahatalanjona nataony. Ny taona NASA, indrindra indrindra, dia naka io lehilahy io - izay matetika antsoina hoe "mpanamory sambon-danitra" - avy amin'ireo iraka Gemini nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 1960 ka hatramin'ny volana ambony an'i Apollo, ary farany tamin'ny mpamorona fanandramana farany: to space orbital.
Ny fihetsiketseham-bahoaka ataon'ny tanora dia toy ny tony, indraindray manenjika, fa ny injeniera matihanina sy mpanamory foana. Nandritra ny fiaramanidin'i Apollo 16, dia navotsotra izy ary nifantoka fa ny taham-pon'ny fony (narahina avy any an-tany) dia nipoitra moramora kokoa. Fantany tsara ny fandinihan-dry zareo ny sambon-danitra na ny fitaovana, ary avy eo niparitaka tamin'ny endriny mekanika sy injeniera, ary matetika no nilaza, taorian'ny fanontaniana sasantsasany, "Mangataka fotsiny aho ..."
Gemini sy Apollo
John Young dia nanatevin-daharana ny NASA tamin'ny taona 1962, tao anatin'ny tarika Astronaut 2. Ny "mpiara-mianatra" taminy dia Neil Armstrong, Frank Borman, Charles Pete Conrad, James A. Lovell, James A. McDivitt, Elliot M. See, Jr, Thomas P Stafford, ary Edward H. White (izay maty tao amin'ny afo Apollo 1 ). Nantsoina hoe "New Nine" izy ireo ary ny iray kosa nanohy nanidina misiona maromaro nandritra ny folo taona manaraka. Ny zava-niavaka dia i Elliot See, izay maty tao amin'ny fianjeran'ny T-38. Ny sambany voalohany tamin'ny sidina an-jatony dia tonga tamin'ny Martsa 1965 nandritra ny vanim-potoanan'ny Gemini tany aloha , fony izy nanamory ny Gemini 3 tao amin'ny iraka voalohan'ny Gemini. Ny taona nanaraka, tamin'ny jolay 1966, izy no mpanamory baolina ho an'ny Gemini 10 izay toerana niarahany sy ny ekipany Michael Collins no laharana roa voalohany tao amin'ny habakabaka.
Rehefa nanomboka ny iraka ataon'i Apollo, dia avy hatrany dia nilofosana i Young mba hanidina ny iraka fanaovana famolavolana akanjo izay nitarika ny fiposahan'ny Moon tamin'ny voalohany. Io iraka io dia Apollo 10 ary nitranga tamin'ny Mey 1969, roa volana talohan'ny nandreseny an'i Armstrong sy Aldrin ny dia nataony. Tsy nanidina intsony ny tanora hatramin'ny taona 1972 rehefa nandidy an'i Apollo 16 izy ary nahatratra ny fiaramanidina fahadimy teo amin'ny tantaran'ny olombelona. Nandeha tamin'ny Moon izy (nanjary ny olona fahasivy) hanao izany ary nitondra fiarandalamby iraisam-pirenena.
Ny sidina voalohany tao amin'ny seranam-piaramanidina Columbia dia nitaky serasera maromaro tamin'ny astronauts: pilotana efa za-draharaha sy fiaramanidina manana traikefa. Nifidy an'i John Young ny masoivoho mba handidy ny zotram-pialan-tsasatry ny orbiter (izay tsy mbola nentina tany an-habakabaka niaraka tamin'ny olona tany an-tsambo) ary i Robert Crippen ho mpanamory. Nirotsaka an-tsehatra izy ireo tamin'ny 12 Aprily 1981.
Ny iraka dia ny voalohandohany voalohany nampiasa balafomanga matanjaka, ary ny tanjon'izy ireo dia ny hahatongavana any amin'ny morontsiraka, ny fiaramanidina ny Tany, ary avy eo dia miverina any amin'ny tany azo antoka amin'ny tany, toy ny fiaramanidina. Ny sidina voalohany an'ny tanora sy i Crippen dia fahombiazana ary nalaza tamin'ny sarimihetsika IMAX antsoina hoe Hail Columbia . Raha ny marina tamin'ny lova ho pilotan'ny fitsapana, dia nidina avy teo amin'ny kamiao i Young rehefa avy nandehandeha ary nanao fitsangatsanganana tao amin'ilay mpitsidika, nanipy ny totohondriny teny an-dàlambe ary nanamarina ny asa tanana. Ny valin-kibony nataony nandritra ny fandefasana gazety an-dàlam-panafody dia marina amin'ny maha-fitaovana azy sy ny mpanamory. Ny iray amin'ireo valinteny be mpampiasa indrindra dia valin'ny fanontaniana mikasika ny fanesorana ny sambo raha misy olana. Nilaza fotsiny izy hoe: "Alefao fotsiny ilay tifitra kely".
Taorian'ilay sidina voalohany nahomby tao amin'ny seranan-tsambo, i Young dia nandidy iraka iray hafa-STS-9 indray tany Columbia . Nitondra ny Spacelab ho any an-tsambo izy, ary tamin'io iraka io, i Young dia nitazona ny tantara ho olona voalohany hiondrana anaty sehatra enina. Tokony hiverina indray izy tamin'ny taona 1986, izay mety hanome azy habaka fandrakofam-baovao hafa, fa ny Tafika Challenger kosa dia nanemotra ny fandaharam-potoan'ny sambo NASA nandritra ny roa taona mahery. Taorian'io zava-doza io, dia nanakiana mafy ny fitantanana ny NASA i Young noho ny fiatrehany ny fiarovana amin'ny serasera. Nesorina tamin'ny adin'ny sidina izy ary nanendry asa birao iray tao amin'ny NASA, nanompo tao amin'ny toeran'ny mpanatanteraka nandritra ny andro sisa niainany. Tsy nanidina intsony izy, rehefa avy nanao fampiofanana maherin'ny 15.000 ora sy fiomanana ho an'ny asa fitoriana am-polony tapitrisa ho an'ny masoivoho.
I John Young dia niasa ho an'ny NASA nandritra ny 42 taona, nialany tamin'ny taona 2004. Efa nialany tao amin'ny tafika an-dranomandry niaraka tamin'ny laharana kapiteny taona maro lasa izy. Na izany aza dia nijanona ho mavitrika amin'ny raharahan'ny NASA izy, nanatrika fivoriana sy fampahafantarana tao amin'ny Foiben'i Space Space Flight tany Houston. Nanao fisehoana imasom-bahoaka indraindray izy mba hankalaza ny dingana manan-danja manan-danja amin'ny tantaran'ny NASA ary koa nahatonga fisehoan-javatra tany amin'ny fivoriana manokana sy fivoriana fanabeazana vitsivitsy, fa raha tsy izany dia mijanona ivelan'ny maso hatramin'ny fahafatesany.
John Young nanafotra ny tilikambo nandritra ny fotoana farany
Ny astronoma John W. Young dia maty tamin'ny aretina pnemonia tamin'ny 5 Janoary 2018. Nandritra ny androm-piainany, dia nandositra maherin'ny 15.275 ora tamin'ny fiaramanidina isan-karazany izy, ary efa ho 900 ora tany an-habakabaka. Nahazo mari-pankasitrahana maro izy noho ny asany, anisan'izany ny meday miaramila maranitra miavaka miaraka amin'ny kintana volamena, ny medaly kongresy fanomezam-boninahitra iraisam-pirenena, ny medaly fandaharam-potoana miavaka amin'ny NASA miaraka amin'ny ravina ravina telo, ary ny medaly fandaminana serivisy NASA. Izy dia fitaratra amin'ny seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina samihafa, manana sekoly sy planetarium ho azy, ary nahazo ny loka Philip J. Klass tamin'ny 1998. Ny fahendren'i John W. Young dia manitatra lavitra lavitra ny fotoana handehanany mankany amin'ny boky sy horonan-tsary. Hotsaroany foana izy noho ny anjara asany manan-danja amin'ny tantaran'ny famakafakana habaka.
Hitady Dr. Sally Ride - Vehivavy Amerikana voalohany mankany amin'ny toerana
Edward Higgins White II: The Spacewalker voalohany any Amerika
Tsidiho ny Buzz Aldrin
Fahagagana avy amin'ny Skies: Tantaran'ny Chelyabinsk Meteor
'Oumuamua: mpangalatra avy any ivelan'ny rafi-masoandro
Ny tantaran'ny sambo Shuttle Challenger
Astro-Hoaxes hihomehezana (fa aza mitondra tena)
Toerana voalohany: Avy amin'ny alikan'ny Espace mankany Tesla
Hahita ny vehivavy voalohany eo amin'ny sehatra!
Jeografia, Symbolic sy fepetra momba ny fanjakana momba an'i Texas
Science College Stats
Ny paikady sy ny ady amin'ny ady an-jatony
Globalization, tsy fananana asa ary famerenana. Inona no atao hoe rohy?
Free Classes Anglisy any USA Learns
Ny horonan-tsarimihetsika tsara indrindra momba ny mpampianatra mampanentana
Mamorona fanadinana tsotra amin'ny Access 2010
Ny fomba handikana ny 'mitady' (hikaroka)
Inona no mahatonga ny taratasy fanolorana tsara?
Ny fifanarahana tany Paris tamin'ny 1783
Fomba fisakafoan-jaza: Ahoana no atao trondro amin'ny alina
Ice Breakers ho an'ny andro voalohany amin'ny sekoly fanabeazana fototra
Inona no 'mahatakatra ny teny gramama amin'ny teny malagasy?
Fampianarana tsy tapaka eo amin'ny asa - Inona no ao anatinao?
Frantsay Tato ho ato: "Futur Proche"
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny ghost, mpandala ny saina sy fihomehezana?
PEREZ - Ny anaran'ny anarana sy ny orinasa
Ireo Top Christian Songs tamin'ny taona 2008
Ny fotsy hoditra sy ny atidoha
Nahoana no tsy nahomby ny Fifanekem-pinoana?
Ireo horonan-tsary mampihetsi-po indrindra amin'ny fotoana rehetra
Fitsipika sy fomba fiasa mahomby